नेपाल आज | ओलीले पद नपाउँदा दिल्लीलाई धारेहात लगाए, अहिले लम्पसार परे
ओलीले पद नपाउँदा दिल्लीलाई धारेहात लगाए, अहिले लम्पसार परे
धनराज गुरुङ, नेता, नेपाली कांग्रेस
हालको सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु सबै हरेक दिन केही न केही घोषणा गर्न व्यस्त हुनुहुन्छ । घोषणाको चाङ लागिसकेको छ । तर काम सुरु हुन सकेको छैन । यो सरकारबाट जनताले स्थायी सरकार, सुशासन र आर्थिक विकासको आशा गरेका छन् । खासमा अहिलेको समयमा जसको सरकार बने पनि जनताले आशा गर्ने भनेको आर्थिक समृद्धिकै हो ।
मूल कुरा मन्त्रीहरुमा सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । घोषणा गरेर, बोलेर कसरी लोकप्रिय हुन सकिन्छ भन्नेमा उहाँहरु क्रियाशील हुनुहुन्छ । उहाँहरुले घोषणा गर्ने र निर्देशन दिनेबाहेक अरु केही गर्नु भएको छैन । आज निर्देशन दिन्छन्, तर काम हुँदैन । अनि भोलि कडा निर्देशन दिन्छन्, अर्को दिन अझै कडा निर्देशन दिन्छन् । सबैले बुझेको कुरा के हो भने बिरबलको आगोले खिचडी पाक्दैन ।
सरकारले दोष अरुमाथि थोपरेर आफू चोखिन खोजेको छ । सरकारको काम अरुलाई दोष लगाएर आफू उम्किने होइन । सरकारमा त काम गर्न जाने हो । अघिल्लो सरकारले भूल नै गरेको भए पनि सच्याएर अगाडि बढ्ने हो । तथ्यहरुलाई बंग्याएर सरकारको काम अरुलाई औंला तेस्र्याउने होइन ।
अर्थमन्त्रीले समेत त्यही गर्नुभयो । श्वेतपत्रका नाममा विदेशी लगानी नेपालमा आउन सकने सम्भावना छैन भनिदिनुभयो । अर्थमन्त्रीले निराशा फैलाएपछि अरु कसरी आशावादी हुन्छन् ? यो त मुलुकका लागि बेइमानी हो । उहाँले विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउनु पर्नेमा भएको वातावरण पनि धमिलो बनाउनु भयो । उहाँको कुरापछि कुन चाहीँँ देशले नेपालमा लगानी गर्ला त ?
ओलीको राष्ट्रवादको जलप
केपी ओलीले राष्ट्रवादको मुखुण्डो भिरेर जनता झुक्याउनु भयो । जनता पनि झुक्किए । भोट दिए । सरकारमा पुर्याए । तर यसपटक उहाँको राष्ट्रवाद पित्तलमा लगाएको सुनको जलप मात्रै हो भन्ने स्पष्ट भयो । उहाँले नियतवस चीनको बोआओ सम्मेलन छल्न त्यही समयमा भारत भ्रमण राख्नु भयो ।
चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना ‘वान बेल्ट वान रोड’मा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । बोआओ सम्मेलनमा नेपालका राष्ट्रपति नै सहभागी भइसकेका छन् । तर केपी ओली यसपटक बोआओ सम्मेलन आफू नगएको मात्रै होइन, अरुलाई पठाएर कुटनीति सन्तुलन गर्न पनि चाहेनन् । यो त सिधै कुटनीतिक असन्तुलन हो । बाहिर बाहिर राष्ट्रवादको मुखुण्डो भिर्ने भित्रभित्र दिल्लीमा लम्पसार पर्ने चरित्र देखियो ।
भारत भ्रमणमा गएर पनि केपी ओलीले न अवैध बाँधको कुरा गर्नुभयो, न सीमा अतिक्रमणको, न १९५० लगायतका असमान सन्धिबारे कुरा गर्नुभयो । उहाँ दिल्ली जानुको एकमात्रै अर्थ ‘ओहोदाको प्रमाणपत्र’ बुझाउन मात्रै हो त ? जनताले यो प्रश्नको जवाफ चाहेका छन् ।
हिजो पद नपाउञ्जेल दिल्लीलाई धारेहात लगाउने, अहिले त्यहीँ गएर लम्पसार पर्ने दोहोरो चरित्र केपी ओलीमा देखेँ मैले ।
म विगतको सानो किस्सा राख्न चाहन्छु । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले भारतमै गएर १९५० को सन्धि मान्दैनौ भन्नु भएको थियो । सो सन्धिमा हामीलाई हतियार खरिद गर्दा भारतको स्वीकृति लिनु पर्ने खालको प्रावधान छ । तर कृष्णप्रसाद भट्टराईले भारतीय पक्षलाई ‘हामीलाई जताबाट किन्दा सस्तो पर्छ, त्यहीबाट किन्छौं’ भनिदिनु भयो । यसकारण मुखले राष्ट्रवाद होइन, व्यवहारमा राष्ट्रवाद चाहिन्छ ।
यसो भन्दैमा मैले मेरो पार्टीका सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहीँँ भारतमा गएर ‘संविधान संशोधन गर्छौं’ सम्म भनेका कुरा सही हुन् भन्ने खोजेको होइन । आन्तरिक मामिलालाई दिल्लीमा लगेर विस्कुन लगाउनु हुँदैन भनेर मैले त त्यही बेला भनेको हो । यसकारण देउवाले चाहीँ आफूले जस्तै काम गर्ने केपी ओलीको विरोध गर्न खासै आवश्यक छैन ।
राष्ट्रवादीको भेट दलाई लामाका प्रतिनिधिसँग
२०७३ साल कात्तिक महिनामा भारतको गोवामा भएको एक सम्मेलनमा सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रधानमन्त्री डा. लोब्सांग सांगेसँग एउटै मञ्चमा बस्नु भयो । एउटै सभालाई सम्बोधन गर्नुभयो । हामीले एक चीन नीतिलाई स्वीकारेका छौं । चीन टुक्रा पार्ने अभियानमा लागेका सँग हाम्रो सम्बन्ध हुँदैन । तर सभापति देउवाले सांगैसँगै मञ्चमा सम्बोधन गर्नुभयो । हामीले विरोध गर्यौं ।
यसपटक त राष्ट्रवादी केपी ओलीले दलाई लामाका प्रतिनिधि मास्टर कर्माको खादा दूतावासमै ओढ्नु भएछ । उहाँको सम्बन्ध मास्टर कर्मासँग यसअघि देखिकै रहेछ । प्रश्न उठ्छ के नेपाल सरकारले एक चीन नीतिमा पुनर्विचार गर्न खोजेको हो ? होइन भने छिमेकी चिढ्याउने काम किन गर्छ सरकारले ?
सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्ने गरी पार्टी बलियो बनाउँछु भन्नुभएछ । विचार राम्रो हो । धन्यवाद भन्नु पर्छ । तर राजनीतिमा सफलता पाउन नीतिगत, विधिगत विषयहरु बिर्सन मिल्दैन । पार्टी चाहीँ विधिविपरीत चल्ने अनि सफलताको सपना मात्रै देख्ने त हुँदैन । आज पनि नेपाली कांग्रेसको सांगठनिक संरचना एकात्मक छ । तर मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ । कांग्रेसका स्थानीय कमिटीहरु पुरानै ढर्राका छन् । वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशको संरचनामा पार्टी गएकै छैन ।
यसकारण हामीले भनेका छौं कि यी सबै काम गर्न महाधिवेशन गनुपर्छ । यसका लागि केही गरौं । तर महाधिवेशन नगर्ने अनि पार्टी सुधार मात्रै गर्छु भन्ने तर्कसंगत हुँदैन । नियमानुसार अर्को महाधिवेशनका लागि दुई वर्ष बाँकी छ । महाधिवेशनसम्म यसैगरी पार्टी लथालिंग राख्ने, अनि अर्को चुनावमा बहुमत ल्याउँछौं भन्नु चाहीँ गफाडीको गफ मात्रै हो । पार्टी भित्रको भ्याकम अन्त्यका लागि पनि महाधिवेशन आवश्यक देखिएकोछ ।
(नेता गुरुङसँग भएको कुराकानीमा आधारित)